जीवनशैली Archives | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
December 3, 2020 Nepal E News
काठमाडौं, १७ मंसिर । नेपालले कोरोना संक्रमणबिरुद्धको खोप ल्याउन आवश्यक तयारी तीब्ररुपमा अघि बढाएको छ । यसअघि नै औषधि अध्यादेश जारी गरेर कानूनी अड्चन फुकाएपछि नेपालले कोभाक्स सुविधा अन्तर्गत सहुलियत दरमा समयमै कोभिड–१९ को खोप पाउन सम्बन्धित निकायमा प्राविधिक विवरण समेत पठाइसकेको छ । लामो समयको प्रतीक्षापछि विश्वमा कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध हुन थालेको छ । कोरोनाविरुद्धको खोप फाइजरको प्रयोग गर्न बेलायतले अनुमति नै प्रदान गरिसकेको छ । बेलायतको औषधि नियमनकारी निकाय मेडिसिन्स एन्ड हेल्थकेयर प्रोडक्स रेगुलेटरी एजेन्सी (एमएचआरए)ले फाइजरको भ्याक्सिन प्रयोगका लागि स्वीकृति दिएको छ…
जीवनशैलीनेपालले कोरोना संक्रमणबिरुद्धको खोप ल्याउन आवश्यक तयारी तीब्ररुपमा अघि बढाउदैLeaveacomment
March 13, 2020 Nepal E News
हामी भोक लागेपछि पेट चर्कने गरी खान्छौं । मिठो-मसिनो पाएपछि भरपेट खाइदिन्छौं । काम वा अन्य व्यस्ततामा भने भोको पेट पनि बस्तौं, घण्टौंसम्म । खाना शरीरको अनिवार्य र नियमित आवश्यक्ता हो भन्ने कुरा हामीलाई हेक्का छैन । खानुपर्छ भन्ने त बुझेका छौं, तर कसरी खाने, कतिबेला खाने, के खाने, कति खाने भन्ने कुरामा हामी बेवास्ता गर्छौं । यस्तो कुरा जान्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन । शरीर सञ्चालन एवं निर्माणका लागि विभिन्न पोषक तत्व आवश्यक पर्छ । यसरी आवश्यक पर्ने पोषकतत्वको स्रोत खानेकुरा नै हो, जो हामीले खान्छौं । यस्ता पोषक तत्व…
जीवनशैलीLeaveacomment
March 8, 2020 Nepal E News
परिवर्तित समयले परिवारलाई आज एकल परिवार प्रणालीमा परिवर्तन गरिदिएको छ । सानैदेखि छोरीहरुलाई बुबाको प्यारी मानिन्छ । त्यसैले त छोरीहरुका लागि उनको आदर्श नै बुबा हुन्छन् । तर, समस्याको कुरा के छ भने विवाहपछि छोरीहरु आफ्ना श्रीमानलाई बुबाको जस्तै तौर-तरिकामा ढाल्न सक्दैनन् । छोरीहरु हरेक समय आफ्नो श्रीमानमा बुबाको तौर-तरिका खोज्ने गर्छन् । यो समस्या त्यतिबेला अझ बढ्छ । जब उनीहरुले आफ्ना श्रीमानलाई स-साना कुराहरुमा पनि आफ्नो बुबा जस्तो नभएको भन्दै पेच हान्ने गर्छन् । विवाह भएपछि नयाँ घरमा प्रवेश गर्दा उनको मनमा अनेकौं सपनाहरुसँगै केही डर पनि रहेको हुन्छ…
टन्सिलको घरेलु उपचार
February 26, 2020 Nepal E News
जब टन्सिलाइटिस नामक ग्रन्थीमा संक्रमण हुन्छ, घाँटी भित्र घाउ भएको वा सुन्निएको अनुभव गर्छौं । यस्तो अवस्थामा खानपिन गर्न समस्या हुन्छ । खानपिन गर्न मात्र होइन, थुक निल्न पनि कठिन हुन्छ । त्यो भन्दा अर्को कठिनाइ हो, टन्सिलाइटिस ग्रन्थीमार्फत हानिकारक ब्याक्टेरिया शरीरभित्र पुग्छ । वास्तवमा यो त्यस्तो ग्रन्थी हो, जसले सामान्य अवस्थामा हानिकारक ब्याक्टेरियाबाट शरीरलाई रक्षा गर्छ । मुखबाट शरीरमा जाने ब्याक्टेरिया रोक्ने काम यसले गर्छ । तर, जब यो ग्रन्थी नै संक्रमित हुन्छ भने, त्यसले शरीरमा कति जटिल समस्या निम्त्याउँछ ? अक्सर, हामीलाई टन्सिल भइरहेको हुन्छ । टन्सिल भएपछि…
February 25, 2020 Nepal E News
हेलिकप्टर अभिभावक’ भन्ने शाब्दिक अवधारणा सन् १९६९ मा सुरु भएको हो । डा. हेम गिनाट्स को किताब ‘विटविन प्यारेन्ट्स एण्ड टिनएजर्स’मा पहिलोपटक यसको प्रयोग भएको थियो । उनको यो अवधारणा यति लोकप्रिय भयो कि सन् २०११ मा शब्दकोशमा समेत यसलाई समेटियो । त्यसपछि जो कोही पनि यस्तो अभिभावक या संरक्षक हुनसक्छ भन्ने मान्यता विश्वभरी फैलिन थाल्यो । को हुन् हेलिकप्टर अभिभावक ? हेलिकप्टर अभिभावक शब्दले यस्तो आमा बुबालाई चिनाउने गर्छ । जसले आफ्ना बच्चाहरुको क्षमता विकासको लागिभन्दा पनि हरेक काममा आफ्नो सहयोग मार्फत् बच्चालाई कमजोर बनाइरहेका हुन्छन् । ती अभिभावकहरुले…
नङ टोक्ने बानी, गर्छ गम्भीर हानि
February 17, 2020 Nepal E News
कतिपयको बानी हुन्छ, नङ टोक्ने । फुर्सद पाउनसाथ उनीहरु नङ टोक्न थाल्छन् । जबकी आफुले नङ टोकिरहेको उनीहरुलाई भेउ हुँदैन । नङ टोक्ने बानी सामान्य लाग्न सक्छ । तर, यसले स्वास्थ्यमा निकै नराम्रो असर पुर्‍याउँछ । के पनि भनिन्छ भने, नङ टोक्नु भनेको तनावग्रस्त हुनुको संकेत हो । तर हामी हाम्रो नङ टोक्ने बानीबाट हामी सजिलै छुट्कारा पाउन सक्दैनौं । फोहोर नङ चपाउनाले रोगका किटानुहरु शरीर भित्र प्रवेश गर्छ नङमा साल्मोनेला र ईकोलाई जस्ता रोगहरु उत्पन्न गर्ने किसिमका ब्याक्टेरियाहरु हुन्छन् । जब तपाइर्ं दाँतले नङ टोक्नु हुन्छ, ब्याक्टेरिया सजिलै तपाईंको…
February 14, 2020 Nepal E News
मानिसको जन्मेको समय र उसको वातावरणले उसको भविष्य निर्धारण गर्ने गर्दछ । कुन बालक कुन बार र समयमा जन्मेका हुन्, उनीहरुको उक्त साइतले स्वाभाव र चरित्र निर्धारण गर्ने ज्योतिषहरुले बताउने गरेका छन् । त्यसैले कुन बार जन्मेका मानिसहरु कस्ता हुन्छन् र उनीहरुको जीवनको विकासक्रम कसरी अगाडि बढेको हुन्छ । त्यसलाई हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौ । आइतबार १. आइतबार जन्मेका व्यक्ति सकारात्मक सोचका मालिक हुन्छन् र निकै विश्वसनीय हुन्छन् । २. तपाईंहरु अन्र्तमुखी हुने भएका कारण थोरै साथीहरु हुन्छन् । ३. निकै संवेदनशील हुने भएका कारण तपाईंहरु कसैले भनेको कुरालाई…
रिसाएको प्रेमीलाई तुरुन्त फकाउने यस्ताे टिप्स्
February 14, 2020 February 14, 2020 Nepal E News
प्रेम सम्बन्धमा कैयौंपटक प्रेमीप्रेमीकाबीच मनमुटाव हुनसक्छ । यसरी मनमुटाव आउँदा प्रायजसो केटाहरुले नै आफ्नी प्रेमीकलाई फकाएको देखिन्छ । तर आज हामी मनमुटाव हुँदा प्रेमीलाई कसरी फकाउने भन्नेबारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौं । यसको लागि केही खास तरिकाहरु अपनाउनुपर्ने हुन्छ । केटाहरुले प्राय आफ्नो मनका कुराहरु दबाएर राख्नेगर्छन् । यस्तो अवस्थामा तपाईंले आफ्नो पार्टनरलाई मुड खराब हुनुको कारणबारे सोध्नुहोस् । यदि तपाईंले प्रेमी रिसाएको कराण थाहा पाउनुभयो भने सजिलैसँग समाधान निकाल्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा तपाईंले सरप्राइज दिन सक्नुहुन्छ । यसको लागि केही उपहार ल्याइदिने वा केही विशेष कुराहरु तयार गर्न…
केराको बोक्राको फाइदा– शरीरको मुसा हटाउनदेखि कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण गर्नसम्म
December 11, 2019 Nepal E News
केरा स्वास्थ्यका हिसावमा निकै लाभदायक फलफूल हो । केरामा मानव शरीरलाई आवश्य पर्ने धेरै पौष्टिक तत्वहरु पाइन्छ । केरामा भिटामिन बी-६, बी-१२, पोटाशियम र म्याग्नेशियम जस्ता आवश्यक पोषक तत्व पाईन्छ । बिशेष गरि केरा मसल्स र तौल बढाउनको लागि उपयोगी हुन्छ । केरा खाँदा बोक्रा फाल्नु स्वभाविक हो । तर तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ केराको बोक्रामा गुदीमा भन्दा धेरै भिटामिन पाइन्छ । केराको बोक्रामा भिटामिन ए प्रचुर मात्रमा हुन्छ । जसले शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउँछ । जसमा लुटेनिन नामक एक तत्व हुन्छ, जुन आँखालाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ तथा…
December 10, 2019 Nepal E News
बस, माइक्रो, ट्याक्सी आदिमा टाढाको यात्रा गर्दा धेरैलाई वान्ता अर्थात उल्टी हुने समस्या हुन्छ । वान्ता हुने समस्याका कारण कतिपय मानिसहरु यात्रा गर्नुपर्ने भएमा पहिलादेखि नै असहज महशुस गर्छन् । वान्ता हुने समस्याका कारण कतिपय साना बालबालिका त बस वा माइक्रो देख्ने बित्तिकै डराएर रुनसमेत थाल्छन् । सवारी साधानमा यात्रा गर्दा किन हुन्छ वान्ता ? यदी तपाईलाई पनि सवारी साधानमा यात्रा गर्दा वान्ता भएको छ भने तपाईलाई राम्रोसँग थाहा छ वान्ता हुँदा शरीर र मन कति धेरै कमजोर हुन्छ भनेर । त्यसैले आज हामी वान्ता किन हुन्छ र वान्ता हुनबाट…